Home » Akụkọ ụgbọ elu » Ihe ndekọ ọhụụ ọhụrụ emere na FRA
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) jere ozi ihe karịrị ndị njem 69.5 nde na 2018, si otú a tinye ọkwa ọhụrụ na akụkọ ihe mere eme ọdụ ụgbọ elu.
N'iji ya tụnyere 2017, okporo ụzọ dị n'ọdụ ụgbọ elu kasị ukwuu na Germany mụbara site na ihe dị ka nde ndị njem 5 ma ọ bụ pasent 7.8. Ọganihu a siri ike sitere na mwepụta nke ụzọ ndị ọzọ na-aga ebe ọhụrụ si FRA na site na ụgbọ elu na-abawanye elu ụgbọ elu.
N'ikwu banyere ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ nke 2018, onye isi oche onyeisi oche Fraport AG Stefan Schulte kwuru, sị: "Afọ gara aga egosila ọzọ na a ka nwere nnukwu mkpa maka ụgbọ elu. Na Frankfurt, anyị enwetala ogo ụgbọ elu kachasị elu na akụkọ ntolite anyị. Nke a na-egosi ọnọdụ Frankfurt n'ọdụ ụgbọ elu dị ka otu n'ime ọdụ ụgbọelu na-eduga na Europe. N'otu oge ahụ, mmụba pụrụ iche nke ikuku ụgbọ elu emeela ka anyị nwee nnukwu nsogbu nye anyị na mpaghara ụgbọelu niile. Mụ na ndị mmekọ anyị, anyị na-agba mbọ iweghachi ma bulie oge na ntụkwasị obi n'ikuku
okporo ụzọ. ”
N’afọ 2018 zuru ezu, mmegharị ụgbọ elu na FRA rịrị elu site na pasent 7.7 ruo 512,115 wepụrụ na ọdịda n’afọ 2018. Iguzozi mwepụ buru ibu (MTOWs) mụbara site na 5.1 pacenti ruo ihe ruru 31.6 nde metrik tọn. Mbupu ibu (airfreight + airmail) weputara ntakịrị 0.7 pasent ịbelata ihe ruru nde tọn metrik 2.2, na-egosipụta enweghị ntụkwasị obi na-eto eto na azụmaahịa ụwa, ọkachasị n'oge ọkara nke afọ.
Na Disemba 2018, ihe karịrị nde ndị njem 4.9 gara site na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt - mmụba nke 7.8 pasent ma e jiri ya tụnyere Disemba 2017. Mmegharị ụgbọ elu rịgoro site na 9.0 pacenti ruo 38,324 weghaara na ịda, ebe MTOW gbakọtara toro site na 6.5 pasent ruo ihe dị ka nde 2.4 nde metric tọn. Mbupu ibu (ikuku ikuku + ikuku) gbasaa site na 1.9 pacenti ruo 183,674 metric tọn na ọnwa mkpesa.
Ọdụ ụgbọelu dị na pọtụfoliyo mba ọzọ kọkwara ọganụ pụtara ìhè na 2018. Onye isi ọrụ Schulte kwuru, sị: “Na mgbakwunye na Frankfurt, imirikiti ọdụ ụgbọelu Group anyị zuru ụwa ọnụ enwetakwala ndekọ ndị njem ọhụrụ n'afọ gara aga. Anyị na-aga n'ihu itinye ego na ọdụ ụgbọelu nke pọtụfoliyo mba anyị, si otú a na-eme ka mmepe ha ogologo oge. Iji mepụta ikike ọzọ, anyị na-arụ nnukwu ọrụ mmeba ugbu a n'ọdụ ụgbọ elu Group anyị, ọkachasị na Gris, Brazil na Peru.
Na Slovenia, ọdụ ụgbọ elu Ljubljana (LJU) tinyere mmụba 7.7 pasent karịa ndị njem 1.8 na 2018. Njikọ ọnụ na ọdụ ụgbọ elu abụọ nke Brazil nke Fortaleza (FOR) na Porto Alegre (POA) ruru 7.0 pasent ruo ụfọdụ ndị njem 14.9. Gbọ njem na ọdụ ụgbọelu 14 Greek na-aga n'ihu site na 8.9 pasent na ngụkọta nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem 29.9. Onu uzo ato kachasi nma na Fraport si na Pọtụfoliyo Greek bụ ọdụ ụgbọ elu Thessaloniki (SKG) na ihe dị ka nde ndị njem 6.7 (elu 7.1 pasent), Rhodes Airport (RHO) ihe ruru nde ndị njem 5.6 (elu 5.0 pasent), na Corfu Airport (CFU) ebe ndị njem na-arị elu 15.3 percent na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 3.4.
Lima Airport (LIM) na isi obodo Peru nabatara ihe karịrị 22.1 nde ndị njem na 2018, na-anọchite anya mmụba nke pasent 7.3.
N'elu ụsọ Oké Osimiri Black Bulgarian, ọdụ ụgbọ elu Twin Star nke Varna (VAR) na Burgas (BOJ) mechiri afọ ahụ na mmụba okporo ụzọ nke 12.2 pasent ruo ihe dị ka nde mmadụ 5.6. Ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT) na Turkey hụrụ njem okporo ụzọ site na 22.5 pasent ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 32.3. Pulkovo Airport (LED) na St. Petersburg, Russia rụrụ ọrụ karịrị ndị njem 18.1 nde - mmụba nke 12.4 pasent. Ihe dị ka nde ndị njem 44.7 ji ọdụ ụgbọ elu Xi'an (XIY) na China, gbagoo pasent 6.7.
Otu akụkọ banyere Jamaicas abụọ: Jamaicas njem nlegharị anya bụ ịhụnanya maka ndị ọbịa
Sichuan Airline na-agbakwunye ụgbọ elu Chengdu- Melbourne